सलोन अब एक्लै नआउने कि ? – Mero Film
सलोन अब एक्लै नआउने कि ?
अभिनेता सलोन बस्नेत भएपछि नाम चलेका हिरो छायाँमा पर्छन् । हो पनि ।
अनमोल केसी, सलिनमान बनियाँ, आशिरमान देशराज जोशी जस्ता हिरोको अभिनय त सलोनको अघि कमजोर देखियो । सलोन राम्रो अभिनय गर्ने कलाकार हुन् । तर, सलोन बस्नेतलाई खै के भएको छ कुन्नी ? सलोन बस्नेत अरु हिरोसँग आउँदा हिरोलाई नै छायाँमा पार्छन् । तर, आफू एक्लै आउँदा आफै छायाँमा पर्छन् ।
सलोनको होम प्रोडक्शन बाबु कान्छा फिल्म मल्टिप्लेक्समा त १ दिन पनि टिकेन । सलोनले नै काम गरेका ए मेरो हजुर २, होस्टेल, गाजलु लगायतका फिल्मले मल्टिप्लेक्समा बम्पर कमाई गरेको होइन त ? उसो भए सलोन बस्नेतको बाबु कान्छा किन चलेन त ?
सलोन बस्नेतलाई दर्शकले एक्लै आउँदा पत्याएका छैनन् । अरु हिरोसँग आउँदा हाबी हुने सलोन आफू एक्लै आउँदा हावा हुन्छन् । यही भएर पनि सलोन बस्नेत अब एक्लै नआउने पो हो कि ? अरु हिरोसँग जोडिएर आउँदा नै फाइदा हो कि ? फिल्म रिलिजको क्रमले त यही नै देखाएको छ , होइन र ?
२०७५ साउन ३ गते ११:०३ मा प्रकाशित
फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाडी’लाई दैनिक तीन लाख घाटा
सलमानको दिए ‘राधे’ पाइरेसी गर्नेलाई यस्तो चेतावनी
५० थान अक्सिजन किन्न पुष्पको सहयोग
फिल्म निर्देशक तथा लेखक चेतन कार्कीको निधन
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारलाई रजतीकान्तको एक करोड
फिल्म ‘तेन्जिङ नोर्गे’ मा अभिनय गर्ने मुख्य पात्र ओबामा र नेटफिल्क्सले खोजे
सलमानको ‘राधे’लाई समिक्षक र दर्शकको खराब रेटिङ